Raha araka ny vaovao marim-pototra azo dia vehivavy telo tao anatin’ny herinandro no nisy nanolana tao anelakelam-pasana ka nisy mihitsy ny namoy ny ainy. Tsy mikely soroka ny ben’ny tanàna vaovao Lalaina Vatosoa miaraka amin’ireo mpitandro ny filaminana mba hanadiovana ny tanàna izay iadidiany. Notsindriany nandritra ny tafa fohy nataony tamin’ny mpanao gazety fa tsy olona avy ao Ambohibao Antehiroka ireo lehilahy telo tratra namono ny vadin’ny mpitandrina fa olona avy any Anosisoa Ambohimanarina. Hezahina hotratrarina avokoa ireo mpanao ratsy na dia avy any amin’ny faritra ivelan’ny kaominina aza ho fiarovana ny zaza amam-behivavy, hoy izy. Tsiahivina moa fa izy no filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanàna avy amin’ny kaominina 24 mandrafitra ny distrikan’Ambohidratrimo.